Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta isi UN XXX: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 December 2019	• 14 Comments
isi mmalite: ilo.org
Internetntanetị wetara anyị ọtụtụ ozi nke na agbanweela site na ihe ọmụma iji nwee mmetụta nke ọma. Dịka agbanweela TV site na ihe ọmụma gaa na mmanya na ntụrụndụ mgbawa, nke John de Mol mezuru; Dịka ọmụmaatụ, ugbu a, mgbasa ozi ọha na-abụkarị ihe na-atọ ụtọ na vidiyo na-atọ ọchị ma na-ele ihe ndị enyi gị na-eme na Instagram. Na mgbakwunye, ọ dị nnukwu mkpa na enwere foto na vidiyo mara mma nke na-eme ka mmadụ ghara ịma onwe ya karịa na ndị mmadụ ka na-enweta ezi ihe ọmụma.
Ma ụlọ mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta na-eme ka obi dị ha mma. Ọ bụrụ na ihe dị ka mmiri ịsa ahụ dị ọkụ, ị ga-akpọ ndị kpọrọ asọ mmiri mmiri mmiri mmiri. Nke ahụ na-atụ gị ụjọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị mkpa, n'ihi na ụwa dị n'akụkụ mmiri ịsa ahụ ahụ nwere ike ịbụ nke na-atọ ụtọ ma dị ụtọ karịa ka anyị chere, anyị ga-ahọrọ maka mmiri ịsa ahụ ọkụ. Mgbasa ozi guzobere ochie na ụzọ ndị isi na-elekọta mmadụ na-ewetara anyị akụkọ ọjọọ, mana nke ahụ na-abata na mmiri ọkụ ma yabụ anaghị enye ọ theụ ahụ.
Anyị chọrọ ka ụlọ anyị dị mma ma nwee ntụsara ahụ ma anyị chọrọ igosi ndị enyi anyị ngwa, ihe ezumike, ụzọ ngwụsị izu na ihe niile nke na-elekọta mmadụ ka ha wee hụ etu anyị si nwee ọ happyụ. Mgbe ụfọdụ ndị ọzọ na-ebi ndụ nwere ntụsara ahụ karị, mana ọ bụrụhaala na ha amasị fim anyị, anyị na ndị otu anyị nwere njikọ. Onye ka na - eche ‘eziokwu’. Kedu ihe nke ahụ bụ? E nwere ọtụtụ isi mmalite. Otu kwuru nke a, nke ọzọ ekwuo. Ọ ka mma ịnọrọ na mmiri na-ekpo ọkụ ma nwee nchekwube. Ndị obi ọjọọ dị ka mmiri oyi na mmiri ịsa ahụ. Ndị ahụ nwere nsogbu maka ihe ọ bụla anyị nwere ike itinye onwe anyị na ya nke ọma. Ndị ahụ bụ ndị ọjọọ. “Teta? Kwụsị ya. Anọ m n'ọnọdụ ziri ezi.
Yabụ ọ bụrụ na onye dị ka Martin Vrijland kwuo ihe, ị ga-ewepụ ya tupu oge eruo. Ndị otu na-ahụ maka mgbasa ozi gbara ọsọ etinyela usoro atụmatụ nlele na nnọkọ ọ bụla na mkparịta ụka n'ịntanetị. Ejikọtara okwu na ebubo na-adịghị mma na Vrijland na-akwadoghị ya, ị chọghịkwa isonye n'òtù ahụ. Do naghi ele ihe di n’ime ya anya. Ọ bụrụ na ekwuru ya na blọọgụ ma ọ bụ nzukọ na Vrijland bụ onye aghụghọ na-eche echiche, ị na-ewere nke ahụ na okpuru. Mba, ọ bụghị: ọ bụ ọrụ steeti na-akpata mkpọsa ahụ. Oge ịhụ ya. Ka anyị gabiga ma lelee ọdịnaya ahụ anya! Know ma ihe. Buru ụzọ saa saa ahụ ị na-asa, saa mmiri nke ọma ma were mmiri dị ọcha ma dị ọcha. Nke ahụ na-eme ka ahụ dị gị mma.
Ọ bara uru ịghọta isi ihe ole na ole na ndụ. Ndụ abụghị naanị mmiri ịsa ahụ. Ọ bụrụ na i guzo na oriri na ọ boatụ boatụ ụgbọ mmiri mara mma ma kpọọ egwu, ọ bụ onye ahụ ga-akpọpụta gị n'thelọ ịgba egwu ọ bụrụ dike gị ma ọ bụrụ na ọ nwere oghere na mkpọchi Titanic? Ọ bụrụ na i jiri plara ntị gị ntị guzoro n'ụzọ ụgbọ oloko na-ege egwu kachasị amasị gị ma ị naghị anụ ụgbọ oloko ahụ si n'azụ na-abịa; ọ bụ onye na-achụpụ gị n'okporo ụzọ iji chebe gị karịa onye nzọpụta gị? Ọ bụrụ n’ịghọta na ọ zọpụtara ndụ gị, ị nwere obi anụrị na ewepụrụ gị mpaghara nkasi obi gị? Ọ bụrụ na ndị niile nọ n'akụkụ ya na-eji igwe ntị ha na-ese vidiyo mgbe a wakporo gị, ị nwere obi ụtọ maka ndị sitere na mpụga ndị bịara ịgba ọsọ maka ihe ahụ? Ọ bụ mma ịdọ aka ná ntị na oge. Ọ bụ mma ma ọ bụrụ na mmadụ na-etinye ọnụ. Gi kpebisiri ya mere n'ezie ezigbo nchekwube ma dịkwa mma ma ọ bụrụ n’ị mụ anya mgbe ụfọdụ. O nwere ike ichebe ndụ gị.
Ọ bụrụ n ’ị ga-eme mkpapụ ma ọ bụ gị na ya na-emekọ ihe, ị ga-ebu ụzọ chọọ ịmatakwu onye. Mgbe ịmalitere ọrụ maka ụlọ ọrụ, ị na-ebu ụzọ mata ma ị na-enwe ụlọ ebe ahụ. Na mkpokọta, anyị ga-achọ ịmatakwu banyere ndị anyị na ha na mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge. Ajụjụ a bụ ma anyị enyochala ndị anyị na ha nwere mmekọrịta dị ogologo; onye mu na ya zutara. Ọ bụrụ na amụrụ nwatakịrị n’ụlọ mkpọrọ, naanị ihe ọ ma bụ n’ụlọ mkpọrọ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ dị n'ụlọ mkpọrọ ahụ, ọ bụ ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Kedu ihe mpụga ụwa dị? Ọ bụrụ na ị maara kọntinent ebe ị toro, nke ahụ apụtaghị na ị na-ahụ foto ahụ n'ezie. Alwayshụla mgbe niile n’ime ya. Eeh, ị ga - eme njem ma mara ọtụtụ mba, mana ajụjụ a bụ etu esi enwete ihe banyere ụwa nke acha. Mata na agba ụcha ejirilarị rụọ akwa a, na agụmakwụkwọ, usoro mgbasa ozi na ndọrọndọrọ ọchịchị ejirila ụcha gị mee ihe banyere ụwa. Ahụ ruru gị ahụ n ’ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ị maara.
Gini ga eme ma oburu na okpomoku di oku a nwere ndi ozo di na ndi Titanic? G in i ma ob ur u na a na-etinye gi n ’ud i nt ur und u nke na ihe juru gi anya? G in i ma ob ur u na ih u na ot ut u ihe im utara ezigh i ezi? Ee, aghọtara m na ị na-eche ozugbo: “Ee, gịnị ka ị ma banyere nke ahụ? Onye kwuru na isi mmalite gị ziri ezi. Ọ masịrị m ikwere na ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọkachamara na-akwado eziokwu nke sayensị. Can gaghị enwe ike nyochaa ihe niile ahụ n'onwe gị. Anyị enweghị ihe ọmụma maka nke ahụ. ”Aghọtara m echiche gị, mana ọ dị n'ezie kwesịrị ya ịchọpụta ma ụgbọ oloko ahụ ga-abịara gị ọsọ ọsọ. Ọ bụ n'ezie kwesịrị ya iji gbanye egwu ọhụụ na ekweisi gị ma lelee ubu gị. Ọ bụ n'ezie kwesịrị ya iji ụgbọ mmiri na-agba ọsọ site na taya ruo n'akụkụ ndụ mgbe ụgbọ mmiri na-eme mmiri.
Ya mere, ka anyị leghachi anya azụ hụ ihe mere ebe ahụ. Take were nsogbu ahụ. Ka emechara, ilebanye anya n’ubu bụ naanị snapchat. Anyị na-agatụ nwa oge gbaa ezigbo mbọ. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịghọta onye mechiri echiche gị banyere ụwa na ịghọta na ejiri mmiri ọkụ kọọ gị mgbe niile. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịchọpụta na George Orwell lụrụ ọgụ n'Agha Obodo Obodo Spanish ma chọpụta na ahụmịhe ndị sitere na agha ahụ wetaara ha ihe dị iche iche n'ụlọ ha karịa ka ọ chọpụtara. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na nwoke a dere akwụkwọ 1984, nke ọ na-ekwu maka "ịgbanwe eziokwu". Ọ gara n’ihu ịkọwa ụfọdụ akụkụ nke mkpachapụ a na edemede 1, yabụ ana m enye gị ndụmọdụ ka ị nyochaa. Mee nyocha ka sayensị na akụkọ ifo na-edobe ike. Ọ bụ eziokwu na ndị ọkà mmụta sayensị nke ihu igwe na-eme ụda dị iche na-akpaghasị uche? Ja, o yiri ka otu ahụ. Ọ bụ eziokwu na akụkọ ihe mere eme gbadoro ụkwụ na Winston Churchill kwuru, "Ọ bụ onye meriri dere akụkọ ihe mere eme"? Ja, o yiri ka otu ahụ.
Gịnị ma ọ bụrụ na ịchọpụta na ihe ndị mere eme merela n'ezie? Ehee, ee, ahụla m ihe omume gị, ọ bụrụ na mgbasa echiche siri ike kemgbe ọtụtụ afọ, nwee ike imepụta ihe dị iche na eziokwu maka ọgbọ niile? "Ee, mana ndị mmadụ gaara ebili onye kwuru ihe banyere ya?" Ọfọn, nke ahụ bụkwa ikpe! Naanị TV, akwụkwọ akụkọ, Facebook na-egosi ihe ha chọrọ ka ị hụ. Eziokwu n'azụ ime nnyocha na-eme nnyocha. Ọtụtụ mgbe gọọmentị na-ejikwa pawn na-eweghara akụkọ ahụ ma na-ejikọta ya na ndị otu oke. N'ụzọ a, ị nwere ike iwepụ nkatọ na ọha mmadụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere usoro mgbasa ozi niile na akpa gị, ị na-ahụ maka nghọta ndị mmadụ. Anyị ga-eme ya dị iche.
Ana m atụ aro ka inyocha okwu ndị a. Ihe mgbochi nke Lenin (ya na Stalin nke nọchiri Stalin) nyere aka na saddle ahụ bụ otu ihe mgbochi ahụ Adolf Hitler nyeere aka na ọdụ nke agha ahụ na agha ụwa nke mbụ na nke abụọ ka emepụtara maka ọgba aghara iji mepụta usoro ọhụrụ. Nke ahụ bụ ọnụ. Gaa n'ihu.
N’agha ụwa mbụ, ekwere ala maka steeti Israel na Nkwupụta balfour. Na Nkwekọrịta nkwekọrịta site na 1933 ọpụpụ ndị Juu na Palestaịn ka e dekọrọ na Germany. Ala nke Israel tọrọ ntọala obere oge mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị. Agha Ụwa nke Abụọ rụrụ ọrụ dị mkpa na nke a.
Otu Adolf Hitler ahụ nke kwuru na ọ kpọrọ ndị Juu asị ma na-achịkwa ha nke ọma ma chọọ ịdị ọcha, 150.000 nwere ndị Ju ọkara na nkeji iri na ụsụụ ndị agha ya, ọkachasị dị ka ndị isi ọgụ. O nwere ndi isi ndi ozo na nke ndi isi ndi Ju nke 15 ndi ozo, ha na ndi Ju iri na abuo ndi ozo no na elu. Ihe atụ kachasị dị nkọ bụ nke Field Marshal Erhard Milch, ọchịagha nke abụọ nke Hermann Goering. Milch rụrụ ọrụ dị mkpa na ịtọlite ​​Luftwaffe. Milch nwere nna ndị Juu na ikekwe nne ndị Juu.
Enwere ọtụtụ ụda na onyonyo nke gasses, nke a kpọrọ 'holocaust', bụ akụkọ nduhie, nke ihe akaebe ụgha gosipụtara. Ọgụgụ isi na-eme ngwa ngwa mgbe ị na-eche maka ya. Ihe omuma di iche di ka iko mmiri oyi n’ime mmiri nke okpomoku. Wantchọrọ iwepụ gị n'òtù ndị dị na Titanic ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri ahụ ampuo? Ee, ikekwe.
Maka inyinya na ebe odi nkpa, odi nkpa ihu ka o nweghi ihe ndi aghapuru ya aru. Maka mmadụ, ọ dị mkpa ka iwepu ngwa ya ma nweta ezigbo foto ụwa gbara ha gburugburu. Mgbe ahụ ị nwere ike ịtụ anya ọdịnihu. Rịba ama na aghụghọ n’akụkọ ihe mere eme, ọ na-eme ka ọ chọpụta na ọ na-abụ otu ihe mgbochi ndị mmadụ na-egwu. Nyere onye iro mepụtara onwe ya aka n'ime ihe nsogbu ahụ. Nke a ga - enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ dị elu. Gini ga-eme ma oburu na ikike a nyere Adolf Hitler aka ime ka onu ogugu ndi mmadu buru agha ma nweta ha ikike obibi? Gini mere Adolf Hitler ji binyere ndi mmadu nke onwe ya ma oburu na o choro ime ka ndi nile no? Lelee onye nyeere Hitler aka. Na webụsaịtị a yana n’ebe a na-edebe ihe ochie, ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eji ngalaba nchọta Ọzọ mmalite dị mma dịka ọmụmaatụ isiokwu a. Jiri nsogbu ahụ pịa ọdịnaya ahụ ma mụọ ya.
N'oge na-adịghị anya mgbe agha ụwa nke abụọ gasịrị, e guzobere mba na ibe ala nke edoberelarị na nkwupụta Balfour n'oge agha ụwa nke mbụ (ala Israel). E guzobere United Nations. Ajuju ajuju bu: Ndi a nile zubere ogologo oge? Ajụjụ buru ibu ị kwesịrị ịjụ onwe gị bụ: recognize matara n’ọchịchị ndị Rom oge ochie nke “Order si Chaos” n’agha niile? Ndi Hitler bu onye iro ojoo nke nyere onwe ya nye ndi Allies ka ha buso Europe agha ma nwee ike itinye uzo ohuru site na ọgba aghara a? Ndi Hitler bu ndi n’enye ndi n’agha n’aghaghachite obodo Israel? Guo ya.
Onye isi nke anyị Bernhard bụ onye na-akwado nhiwe ntọala nke ndị otu Bilderberg. Otu Bilderberg hiwere ntọala nke obodo Europe. Onye isi oche mbụ nke EC ahụ bụ onye ọka iwu n'okpuru Adolf Hitler. Aha ya bụ Walter Hallstein.
Aghọtara m mgbe ị chere:Nke ahụ bụ oke aka nri. Anuru m Brexit, ndi fanx Nexit. Anuru m na Hary Baudet". Otu mgbasa ozi na otu ndoro ndoro ochichi ejirila ya mee ihe onyonyo a. Ha na-anwa ijikọ nkatọ niile nke akụkọ ihe mere eme na sayensị nke gọọmentị na njiri mara nke ọma ejiri rụzie aha 'ihe ziri ezi'.
Ọ bụrụ na anyị ebido hụ na otu ike a na-egwuri egwu kemgbe iri afọ, mgbe ahụ anyị ga-amata na anyị na-ahụ edemede nke ejikere ma gbuo agha dị ka atụmatụ si dị. Anyị amatakwa na a na-eme atụmatụ agha ụwa na ọ bụkwa akụkụ nke nnukwu edemede ahụ. Ma mgbe anyị ghọtara nke ahụ, anyị ga - amata na ma akụkọ akụkọ ma ụgha nke sayensị na - abụ ihe mgbasa ozi na mgbasa ozi na - elekọta mmadụ na - akwalite. Nke a ga - ekwe omume n'ihi na otu ụdị ike ochie ahụ nwere ikike zuru oke na isi mmalite mmiri ịsa mmiri gị. Ndi nwere nghọta banyere ụwa maka ndị na - ahụ maka njikwa ike otu ihe na - egbochi ike ụwa?
Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na a na-eme atụmatụ agha ọzọ (agha maka Jerusalem ka ọ bụrụ nke ziri ezi), nnukwu mgbanwe na ike dị na isi okwu na obere mkpirisi ahụ ka ọ bụ etiti dị n'etiti ga agha ikpeazụ ahụ. Mgbanwe ọchịchị a ga-apụta na US ga-ada n'ụzọ akụ na ụba ma eleghị anya, ọ ga-esikwa na NATO pụọ n'ihi nghọtahie dị ukwuu. Anyị ahụlarị na nghọtahie ahụ gosipụtara na ihe mkparịta ụka ụnyaahụ. Donald Trump na Emanuel Macron mere ihe na esemokwu ha nke ukwuu n'oge nzukọ NATO na London.
Ọ bụ ezie na ndakpọ akụ na ụba na US nwere ike iduga na (atụmatụ) nke ọdịda Trump, nkwupụta Brexit ga-abụ na Europe maka akụ na ụba Europe. N'ihi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ejikọtala ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na akara ejiri nlezianya rụọ (nke ziri ezi) na steig siri ike, ụdị nsogbu akụ na ụba dị otú a nwere ike inye ọkwa mbụ maka ijikọ ụwa ọnụ na idozi ya na echiche na-agbagọ agbagọ. M kwadoro nke ahụ ọzọ isiokwu a na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwere ike igu akwukwo ozo.
Otu ihe egwu ejikọtara na otu ahụ (nke akpọrọ mma-nku ya) bụ nke 'ndị jụrụ ihu igwe'. Eleghị anya, a ga-agbakwunye na ndị otu ahụ nọchiri anya ọdịmma nke nnukwu ụlọ ọrụ ochie, dị ka ihe mere ị ga-eji kwenye ikpo ọkụ ụwa. "Ha lebara anya na mkpa nke ụlọ ọrụ mmanụ na ịnweta mmanụ"Ọ ga - abụ arụmụka nke a ga - anara site na anụ ụlọ. Yabụ, site na njikọta nke ndakpọ akụ na ụba na stigmatization, a na-emeghe ụzọ iji mesịa katọọ nkatọ nke isi atụmatụ UN X XXX dị ogologo (onye ga-esochi 2030).
Amụma m bụ na Turkey ga-abụ ike ọhụrụ ga-emeri Europe. Nke a ga - adị mfe ma ọ bụrụ na ndakpọ akụ na ụba (ezubere) ịbanye na US na Trump kpebiri na ọ ga-adị oke ọnụ inye nchebe maka Europe na-adọga (na-enwe nsogbu ndị dị ka Macron na-akpọ NATO 'ụbụrụ ụbụrụ'). Ọ bụrụ na Europe dara akụ na ụba (n'ihi nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, atụmatụ debxit), ọ ga-abụ nsogbu ọzọ iji gbochie ụtụ ndị ahụ dị elu na mmefu nke NATO. Yabụ na enwere ezigbo ohere na US ga - ewepụ Europe na Europe iji mepụta ohere maka ihe m buru amụma ebe a kemgbe ọtụtụ afọ: mbilite n'ọnwụ nke Alaeze Ukwu Ottoman. Turkey nwere ike banye na oghere ike ma ọ bụrụ na Europe abaghị n'ọgba aghara ma nwee ike rụọ ọrụ dịka onye nzọpụta maka nsogbu a kpachaara anya mepụta.
isi mmalite: un.org
Na ngbanwe ọ bụla nke ike na ndọrọndọrọ ọchịchị ị ga - ahụ na a na - agbanye otu okporo ụzọ mgbe niile. Echela ugbu a na mgbe Erdogan weghaara ọchịchị, anyị na-abụ ndị Alakụba Europe na-enweghị iwu. Mba, anyị ga-ahụ ihe dị iche. Anyị ga-ahụ otu nnwere onwe nke Islam nke anyị enwetala na Iso Christianityzọ Kraịst. Ike ọhụrụ nke Europe ga - eweghara ga - eweghara akara egwurugwu. Ọ bụ egwurugwu ahụ m kọwara n’akwụkwọ m: ụzọ maka ọchịchị ụwa nke Luciferi, nke a ga-ejikọkwa okpukpe niile na ụwa niile. Lezienụ anya na agba egwurugwu na njirimara.
Egwurugwu ahụ bụ ihe a ma ama ma bụrụ akara nnọchi anya usoro ụwa ọhụrụ. Na agbanyeghi na Turkey ga-ebute ụzọ na Europe, ọ gaghị emebi ụzọ a ga-esi ruo ụwa ọhụụ. Ma, ọ ga-ewepụta ike ọhụrụ ahụ nke ga - enyere aka ịlụ agha ụwa nke atọ. Anaghị m a thatụ ya. Na isiokwu a Akọwaara m otu isi ihe a si dị ugbu a n'akwụkwọ na 1871. N'ime agha ikpeazụ ahụ (nke ga-abụ ihe dị na Jerusalem), alaeze Ottoman ga-ebili megide US na Israel. Nke ahụ na-akpata ọgba aghara ikpeazụ ikpeazụ iji mezie ike centralize ike nke UN.
N'agbanyeghi eziokwu na mgba di nkpa ga-ewere ọnọdụ ma ọgba aghara dị mkpa ga-ebilite, ka ọ dị ugbu a, mmeghari ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enweta ike nke ga-aga n'ihu na-akpali UN UN 2030, n'agbanyeghị ọgba aghara niile. Ebumnuche ahụ bụ maka ihe dị mkpa ga - echekwa gburugburu, ma nwee ebumnuche nke ime ka ihe niile bụrụ ihe ịchọrọ na 'ịntanetị nke ihe' ma wuo weebụ njikwa dijitalụ nke na-achọpụta onye ọ bụla n'oge ọ bụla na ebe niile. Akọwara m nke ahụ ọtụtụ isiokwu a. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgụ ya ọzọ.
Ọ na-ewe ụfọdụ mbọ iji pụọ na ụda ọmarịcha ndị otu na Ogwe Titanic wee gafere n'akụkụ nke ndụ. Have ga-eme ihe maka nke ahụ.
Biko leekwa anya na 2030 burukwa ma lebe ntanetị m anya ka ị na-ahụ nke ọma ihe niile na-eme na ntughari usoro a. Gbanye ebe nrụọrụ weebụ a Will gha achota ezigbo nkowa nke isi 2030 a. Ọ dịkwa mma ịgụ akwụkwọ m. N’ebe a ka m kowara na egwurugwu na okike na-anọpụ iche na-ebute ụzọ dị mkpa na edemede nna-ukwu. M kọwaziri ihe transhumanist burukwa na-akpata ihe a na ihe kpatara ya niile nwere iji nwee ya na agụụ ịhapụ ndị mmadụ na ngụkọ mmekọrịta ha na AI (ọgụgụ isi). Ọ dị mkpa na ozi a pụta. Ekwere m nkwa gị na ntinye aka gị. Were nsogbu ahụ ma were oge ahụ wee bilie mgbe ị ka nwere ike.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: paulcraigroberts.org, alt-market.com
Tags: 2021, 2030, burukwa, EU, agba, ihu igwe, london, Macron, NATO, n'elu, trump, vn
Akwa edemede ọzọ Martin. Otuto!
Echere m na nkọwa okwu Johan Cruyff ndị a dị oke mkpa (na isiokwu a, n'uche nke m):
"To ga-agbagbu, ma ọ bụghị na ị nweghị akara."
"Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeri, ị ga-agba mbọ hụ na ị merighi."
"Ọ bụrụ na anyị nwere bọọlụ, ha enweghị ike ịkọ."
"You ga-ahụ ya mgbe ị ghọtara ya."
Ma n'ụzọ ihe atụ enweghị ihe ọ bụla metụtara football ..; )
Isiokwu mara ezigbo mma ma doo anya. Maka ndị na-enweghị akwụkwọ gị mana. Zụta!
A na-awụnye mmiri ịsa ahụ oyi dịka ihe jọrọ njọ, mana ọ dị gị mma. Anọwo m na-asa mmiri oyi ruo oge ụfọdụ ma mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ malitere inwe obi ụtọ. Uru ọzọ bụ na nguzogide na-abawanye ma na-enwe ahụike. Na-emetụtakwa ụbụrụ aka, jiri eziokwu na-enye nri. Na-atụ ụjọ na mbido, ma mgbe ị na-esite na ya, ị ga - enwe ọ happyụ ma mee ka ị dị ọcha.
Ọ bụ ya mere ị ga - eji nweta mmiri ịsa ahụ oyi n'ahụ m 😉👍
Nke a ga-abụ ọdịnihu gị ma ọ bụrụ na ị naghị eleghachi anya azụ ...
Ezigbo onye na - agụ akwụkwọ: lelee anya gburugburu gị na Netherlands ma gụọ akụkọ dị n'izu gara aga…
Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ oge Netherlands na Europe. Legide ihe na-eme. Mara ezigbo mma.
Ee e, elela TV ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ. Ha na-ahụ na ị hụghị ya.
Ihe m na-ekwu::
Gụọ akụkọ ndị dị na saịtị ahụ. Otu banyere ọgụgụ isi, dịka ọmụmaatụ.
Na Netherlands ọ bụ ihe dị egwu na teknụzụ iji mezuo ogige ndị dijitalụ na-akpụ akpụ.
Igwefoto Smart, platoons uwe ojii, igwefoto dị elu n'okporo ụzọ niile. Nnukwu data ..
Guo nọmba igwe eserese ị hụrụ n’ụbọchị.
A na-akpọ ogige mmụta agụmakwụkwọ Dutch
> Ntọala GGZ.
> Carelọ ọrụ nlekọta ndị ntorobịa.
Mara mma na mpụga; oké egwu n'ime.
Nke ahụ bụ ka esi enweta mmiri. Enyerela aha di uto: ihe uche
Mmejuputa atumatu nke stasis nwere ike ibido
GGZ "akpa nlekọta" maka ndị na-achọghị ikwenye ekwenye
Camplọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ntorobịa Dutch. Mara mma na mpụga, oke ụjọ na n'ime. Lee onyoonyo zoro ezo a:
Gụọ ebe a lee ihe na-emenụ:
Lee ebe ọ na-aga. Ime otu ihe ahụ na China:
Anyị a ga-ajụ mgbukpọ ahụ ugbu a, mana nke ahụ abụghị ebumnuche!
Merkel wetara onyinye nke nde Euro nde 60 ($ 66.6 nde).
Kedu mgbe Merkel ga-echeta Oké Mgbukpọ ahụ na Ndị Kraịst Russia mere site n'aka "ndị Kọmunist" Anyị enwere ike ichere ogologo oge? Ọ dị mma, olee otú nke ahụ ga-esi mee?
Nke a bụ ma ọ bụrụ na ezighi m ụzọ na n'oge agha ụwa nke 1. Echere na ọ dịkarịa ala nde 40
E gbuwo Ndị Kraịst. Nke a gụnyere ụbọchị ncheta na Netherlands? Guo ugboro atọ. Gini bu ndi ndu nke ndi Kristian?
Oh, Vrijland, gịnị ka ị na-eme ugbu a! Nke ahụ abụghị ihe ọjọọ na steeti ndị uwe ojii:
" Teknụzụ Smart na ọchịchị ụwa zuru ụwa ọnụ ga-echekwa ihu igwe
Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka »
Nleta nile: 15.887.417
Martin Vrijland op Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?
SalmonInClick op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
Mmiri op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu